Maitiro ekugadzirisa iyo keyboard lag yeiyo iPhone neIOS 14 | IPhone nhau
Maitiro ekugadzirisa keyboard lag muIOS 14
Ini ndinoshamisika kuti sei vana nhasi vanokwanisa kutaipa nekukurumidza zvakanyanya pa iPhone keyboard. Ivo vanoshandisa zvigunwe zviviri-maoko nekumhanya kwadhiabhorosi. Ichi chinyorwa chakanangana navo.
Uye ini ndoti zvinovaitira nekuti ivo ndivo vanogona kunyatso kukoshesa kana nguva pfupi yadarika Ivo vanoona kuti mabhatani ekiyi anoenda nekumwe kunonoka sezvo vakavandudza kuIOS 14. Saka kana iwe uri mumwe wavo, uye uchitambura neakanzi "lag", tiri kuzokupa mhinduro dzekugadzirisa dambudziko.
Vamwe vashandisi vanogona kunge vakaona mamwe "lag" kana vachishandisa keyboard yePhones yavo sezvo ivo vakagadziridza kuIOS 14. Mumaforamu akasiyana siyana vamwe vashandisi vakatobuda vachinyunyuta nezve dambudziko iri.
Zviripachena, idambudziko re software kuti Cupertino ane chokwadi chekuti vatotarisa, uye kazhinji yakagadziriswa mune iri kuuya iOS 14 yekuvandudza. Izvo zvoitika, ngatione zvatingaite isu pachedu kudzivirira kunonoka kunonoka kana iwe uri typing chikara uye iwe uchiona icho "lag".
1 Gadziridza iOS kune yazvino vhezheni
2 Dzorerazve duramazwi rekhibhodi
3 Ita shuwa kuti iwe une chengetedzo inowanikwa
4 Tangazve yako iPhone
5 Dzosera mudziyo wako
Gadziridza iOS kune yazvino vhezheni
Isu tinogara tichikurudzira kuvandudza chishandiso chako kune yazvino vhezheni yakaburitswa neApple. Unogona kunge usina kuvandudzwa, uye iko kukanganisa kwakatogadziriswa nekambani. Kutanga pano usati washandisa nzira dzandinotsanangura munguva inotevera.
Pinda mukati Zvirongwa, ipapo General, uye Software Gadziridza. Kana iwe uine chero chakamirira, chigadzirise. Kana iwe uri kusvika parizvino, ramba uchiverenga.
Dzorerazve duramazwi rekhibhodi
Izvi zvinogadzirisa duramazwi rekhibhodi.
Chimwe chezvikonzero zvekunonoka kungave kushandisa iyo otomatiki uye fungidziro yekugadzirisa mabasa paunenge uchinyora. Sezvaunonyora, yako iPhone inodzidza mazwi matsva kumashure uye oashandisa iwo mune ramangwana otomatiki kururamisa mazano.
Yese iyi data unganidza mu keyboard cache, iyo inogona pakupedzisira kudzora kupindura uye kuita kwese kwebhodhi, kunyanya pamamodheru ekare. Chavo ndechekusetazve duramazwi rako rekhibhodi, uye nekudaro bvisa cache.
Kuti uite izvi, ingo tevera aya matanho akareruka:
Enda ku Zvirongwa, uye pinda General.
Enda kuzasi kwekona, uye tapira Dzosera.
Pano iwe unofanira chete tapira Dzorerazve keyboard duramazwi.
Ziva iwe pachako, uye voila.
Zvino edza kuona kana iro raive dambudziko rako, uye rakagadziriswa.
Ita shuwa kuti iwe une chengetedzo inowanikwa
Akaunti iyo mudziyo iwe unoda nzvimbo yekugara iyo keyboard cache. Kana yako iPhone yakanyanya kutakurwa uye iwe usina rusununguko rwekuchengetera, inogona kuve imwe yezvikonzero zvekuenderera kwe "lags", kwete chete keyboard. Ndisiye nzvimbo yekuti ndishande zvakanaka.
Kana mushure mekuyedza iyo keyboard kuseta iwe unoramba uchiona lag, edza kutangazve yako terminal. Mazhinji madiki ane chekuita nesoftware-ane bugs uye glitches senge izvi zvinogona kugadziriswa nekungotangazve yako iPhone.
Kana iwe uri kushandisa iPhone ne Face ID, tinya bhatani repadivi uye vhoriyamu kumusoro bhatani kuti uwane simba rekubvisa menyu. Kune rimwe divi, kana uri kushandisa iPhone ne Bata ID, tinya uye bata bata bhatani. Uyezve, iwe unogona zvakare kudzima yako iPhone kuburikidza neZvirongwa.
Uye zvakare, iwe unogona zvakare kuyedza kumanikidza kutangazve yako iPhone, "yakawanda mhuka" nzira kupfuura yapfuura imwe. Reset inopisa. Pane maPhones ane mabhatani epamba epanyama, izvi zvinogona kuitwa nekungobatisisa bhatani remagetsi uye bhatani repamba panguva imwe chete kusvikira iwe waona logo yeApple pachiratidziri.
PaPhones nyowani neFace ID, iwe unofanirwa kudzvanya vhoriyamu kumusoro bhatani kutanga, uchiteverwa nevhoriyamu pasi bhatani, uye wobva wadzvanya wabata parutivi / simba bhatani kusvikira iwe waona Apple logo.
Dzosera mudziyo wako
Iyi ndiyo bara yekupedzisira mukamuri. Ini ndakachengeta kwekupedzisira nekuti pasina mubvunzo ndiyo inonetesa. Ita kutanga negadziriro yeparutivi pamusoro iPhone wako, uye kuita zvizere kudzorera. Enda kuZvirongwa, Zvakawanda, Gadzirisazve, uye Bvisa zvirimo uye marongero.
Kana iwe ukashandisa yekupedzisira bara uye uchiri kuona keyboard lag, bata iye Yepamutemo Apple technical Support. Rombo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzirisa keyboard lag muIOS 14
Apple inopa paCyber ​​Muvhuro 2020